Basikety : nanolotra fitaovana ho an’ireo ligim-paritra ny federasiona | NewsMada
Basikety : nanolotra fitaovana ho an’ireo ligim-paritra ny federasiona
Par Taratra sur 07/04/2016
Ho fampiroboroboana sy ho fampandehanana tsara ny taranja basikety eny anivon’ireo ligim-paritra, nanolotra fitaovana ho azy ireo ny federasiona malagasy (FMBB).
Araka izany, ligim-paritra ligim-paritra telo no voasafidy nahazo ireo fitaovana ireo tamin’ity. Nahazo baolina fanaovana fifaninanana miisa 15 avy ny ligin’Atsimo Atsinanana sy Vatovavy Fitovinany raha “tableau éléctronique” kosa ny an’ny ligin’i Bongolava.
Marihina mantsy, tafiditra indrindra amin’ny tetikasa mandrafitra ny fandaharan’asan’ny federasiona ny fampitaovana ireo ligim-paritra mba hahafan’ireto farany manatanteraka an-tsakany sy an-davany ny asa aman’andraikitra hiantsorohan’izy ireo ho fampiroboroboana sy ho fampandrosoana ny taranja basikety eo anivony.
Ankoatra izay, nahatontosa fifaninanam-pirenena roa ny federasiona tao anatin’ny telo volana voalohany. Anisan’ny zava-baovao tamin’ity taom-pilalaovana 2016 ity mantsy ny fifaninanam-pirenena teo amin’ny Fiba 3×3, ny volana janoary lasa teo, narahin’ny “Coupe du Président”.